Sidee Loo Xallin Karaa ama Looga Hortagi Karaa Wahsiga? | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Yaxye Yaasiin Xasan — July 22, 2019
Dhammaan sababaha keena wahsiga ayaa looga guuleysan karaa in aad samaayso waxyaabahan:-
Hadaf: Waa in aan yeelanaa hadaf iyo meel aan doonayno inaan so taabano nolosheenna, inaga oo raacinayna go’aan dhab ah iyo dadaal joogta ah oon ku xaqiijinayno hadafkeenna. Dadaalka ayaa muhiim u ah dabargoynta wahsiga, waxa uuna keenaa natiijo lagu qanco taasoo laga gaadho wahsiga.
Wakhti kasta oo aad hore u qaado tallaabana waxaad dareemaysa culayskeeda iyo faa’iidadeeda ee waa inaad hore u socotaa oo aanad is dhiibin kana baxdaa xadka raaxada iyo is dhigashada.
2. Qorshe: Waa in qofku samaysto jadwal nololeed wakhtiyaysan si u maareeyo shaqo kasta iyo wakhtigeeda; aadna ku qorto maalin walba hawshaad galayso, waxayna kuu saamaxaysaa inaad ahaato mid firfircoon, waxqabadna ku talaabsada.
Qorshuhu waa waxa fududeeyaa suurtogalna ka dhigaa hawl culus, oo aysan macquul ahayn in hal mar la qabto. Qorshayta maalinla ahi waxay udub dhexaad u tahay firfircoonida iyo maaraynta hawlaha joogtada ah.
Cilmi baadhis la sameeyey ayaa lagu ogaaday in go‟aaminta hawlaha shaqo ee maalintii ay habboon tahay in la dajiyo habeenka ka horreeya, qofkuna uu seexdo isagoo maskaxda ku haya qorshaha uu ku dhaqaaqayo ama shaqada u taalla waaberiga. Waxaa la aaminsanayahy in tani ay yareyso wahsiga iyo isku dhex yaaca shaqada.
3. Seexo xilli hore habeenkii. Hurdada la seexdo habeenkii ayaa faa‟iido ballaadhan u leh caafimaad qabka jirka iyo maskaxda. Waa mid ka dhigaysa jirka mid uu ka buuxo tamar uuna shaqsigu dareemo nasniino iyo nashaad. Maskaxda iyo jirka qofka ayaa awood u helaya inay wajahaan shaqo kasta oo adag.
Seexashada xilliga hore ee habeenkii ayaa ka mid ah qodobbada lagu yareyn karo ama lagu dabar jari karo wahsiga.
4. Illaasho wakhtiga: Dhammaan dadku way u simanyihiin wakhtiga. Kuwa guulaysta ee wax soo kordhiya ee naftooda iyo ummaddodaba guusha iyo badhaadhaha u horseeda looma badin, kuwa aan adduunka waxba ka qabsan ee ay noloshoodu hoosaysana lagu ma yarayn.
Qof walba oo adduunka ku nool Ilaahay waxa uu siiyay 24-saacadood maalin kasta. Kuwa guusha gaadha waa kuwa si fiican u maareeya wakhtigooda si habboonna uga faa’iidaysta aminta kooban ee ay haystaan. Halka kooxda kale ee nolosha ka dhacay ay wakhtigooda ku qaataan nolol wahsi, hurdo, meer’meer, meelo-fadhiisi, maxaa lalahaa iyo wax yaabo aanay wax faa’iido ah ka helayn.
Qof walba oo illaashada wakhtigiisa wuxuu guusha uga dhawyahay ku kastoo wakhtigiisa dayaca.
Dhibaatada ugu wayn bulshadeenna haysata ee aan lagu baraarugsanayn cid dareensanna ay yartahay ayaa ah maarayn la’aanta wakhtiga. Qorax kasta oo dhalataa waxay kuu sidaa waa cusub maalintaasi iyadaa kaa faa’iidi oo cimrigaagay ka jari muddo 24 saac ah ama aday guushu ku raaci oo qabsan shaqo ama hawl qarniyo badan oo dambe lagugu xasuusto.
Wakhtigeenna aan ku bixinno wax aakhiro iyo adduun ina anfacaya. Inaad wax barato waa waxyaabaha aad wakhtigaaga kaga faa’idaysan karto, waxaana jira meelo badan ee aad ka faa’idaysan karto sida waxbarashada Online ah sida Somalism Academy. Somalism – https://somalism.org/ waa akademiyad waxbarasho Online ah oo aad waxwalbo ka barani karto adigoo jooga gurigaaga ama goobta shaqadaada. Akademiyadaani waxay u shaqeysaa qaabka waxbarashada ay bixiyaan jaamacadaha waaweyn ee ka jira dalalka horumar fiican ka gaaray nidaamka waxbarashada. Guji halkaan: https://somalism.org/
5. Inaad la saaxiibto dadka wanaagsan: La soco, la noolaw, ku dayo, dadkana ka dooro kuwa hadafka iyo himmadda sare leh, dadka go‟aanka adag wax soo saarka leh ee wax xaqiiya. Kana dheeraw oo hala socon hana la saaxiibin ku nolosha ka dhacay ee wahsada iska eeg cidda aad la soconayso iskana hubi cidda aad saaxiib ka dhiganayso. Sababtoo saaxiib waxa uu ku siiyaa waxa uu haysto, haddii aad la qaybsato waxa uu sito la mid baad tahay oo waxa uu yahay un baad latahay.
6. Dhiirigali naftaada: Dhirigalintu waa shidaalka ugu wanaagsan ee qof kasta ku shaqeeyo. Dhiirigali naftaada una balanqaad abaal marin haddii ay ka lib keento ama ay dhamays tirto hawlihii cuslaa ee aad u qorshaysay waajibna kaga dhigtay inay gudato. Mararka qaar ku abaalmari nafta waxyaabaha ay jeceshahay ee wanaagsan sida: dalxiiska, safarrada iyo waqti la qaadashada dadka la jecelyahay.
Wahsiga ayaa waxaa kale oo looga hortagi karaa habab ay kamid yihiin, kalsooni lasiiyo nafta, isbarida go‟aan qaadashada, ku dhiiranaanta shaqada, iyo jeclaanshaha shaqada aad qabanayso.
Maanta ka dhigo maalintaad iska casishay (joojisay), xubinimadiii wahsiga, wax badan baad qabsan doontaa, in badanna waad raaxaysan doontaa. In aad ka xorowdo wahsiga waxay kugu qaadanaysaa waqti, waa inaad u samirtaa oo aad joogtaysaa ficilladaad ku baabinayso kagana hortagayso wahsiga. Waqti kasta oo aad hore u qaado tallaabana waxaad dareemaysa culayskeeda iyo faa’iidadeeda ee waa inaad hore u socotaa oo aanad is dhiibin kana baxdaa xadka raaxada iyo is dhigashada. Ugu danbayn waxaan nafeheennna kula dardaarmayaa inaan Eebe (SW) aan talo saarano, markastana aan ka magan galno wahsiga iyo caajiska.
Tags: Sidee Loo Xallin Karaa ama Looga Hortagi Karaa Wahsiga?
Next post Waqtigaaga Maalgasho - Noloshu waa mid gaaban waqtiguna waa mid kooban
Previous post Faa'iidooyinka Caanaha Geela oo ay Dunida Hadda ku Baraarugtay